Ngokuqinisekile, wonke umuntu ujwayelene Ngezikhathi ezinjalo, lapho kubonakala sengathi umcimbi othile okwenzekile, noma sahlangana nomuntu owayekade ukubonwa. Kodwa lokho kwaba kanjani futhi ngaphansi kwaziphi izimo, maye, akekho angakwazi ukukhumbula. Kulesi sihloko sizozama ukuqonda lokho Deja Vu nokuthi kungani kwenzeka. Lona umdlalo saqala ngengqondo, noma uhlobo oluthize eyimfihlakalo? ososayensi ukuchaza kanjani lesi simanga? Kungani Deja Vu? Cabanga kabanzi.
Kuyini Deja Vu?
Ngokwezwi nezwi ehunyushwa ngokuthi lo mqondo ngokuthi "kubonakala ngaphambili." Ngokokuqala ngqá leli gama lalisetshenziselwa ngo-Emil Buarakom - wezengqondo ezivela eFrance. Encwadini yakhe ethi "The Psychology Ngokuzayo" futhi uzwakalise umbhali ephakanyiswe Ngezikhathi ezinjalo, ukuchaza ukuthi ngaphambi abacwaningi akazange alinge. Kakade, akekho owayazi kahle-hle ukuthi Deja Vu nokuthi kungani kwenzeka. Futhi uma ingenayo incazelo enengqondo, ukuthi kungathinta udaba enjalo ebucayi? Kuyinto lo mphumela ngokuthi wezifo ethemini yekucala "Deja Vu". Ngaphambi kwalokho, wasebenzisa izincazelo ezifana "paramnesia", "promneziya", okusho ukuthi "kakade", "akakaze abone."
Umbuzo othi kungani kukhona vu Deja, futhi kuze kube namuhla kuseyimpicabadala kuze kube sekupheleni ezingaxazululeki, nakuba Yiqiniso, zikhona imibono eyayisinesikhathi eziningana.
Uma ososayensi musa njalo alinge ukuchaza umphumela nezimbangela zayo, abantu abaningi bayesaba wenze izenzakalo ezifanayo. Ukuze uthole umqondo Deja Vu, abanye bafundisa ngokucophelela okukhulu, uma ucabanga ukuthi kwakunabamemezeli bebelokhu ukushayisana isimo sengqondo. Ngokwemvelo, umuntu oye nomthelela ngokwabo, akuzona abukhali ngolwazi nabangani babo njalo, bathola okungaphezu kwalokho, uzama ngokushesha uyiphonse zonke ngekhanda futhi sikhohlwe. Manje, uma abantu bebazi ukuthi Deja Vu nokuthi kungani kwenzeka, bekuyoba ukuxazulula eziningi izinkinga zabo. Ngemva zonke lezo zenzakalo, izenzakalo, emizweni ukuthi ingezansi explicable nakanjani abangele ukwesaba. Lezi imiphumela Deja Vu libhekisela. Lapho liphuma leli zwi ipelwe kahle - umbuzo akuyona uphuthuma kangaka futhi kubalulekile. Phela, abantu ezithakazelisayo kakhulu ukuthola ukuthi iyini - umdlalo ubuchopho noma iphupho ukuthi ngelinye ilanga wabona. Ake sihlole ezinye izincazelo zalesi simo.
Lokho ososayensi bathi?
ososayensi American baye baqhuba izifundo eziningana ukuze ubone ukuthi kukhona umphumela Deja Vu. Bathola ukuthi ukubukeka kwayo ihlangabezana hippocampus - ingxenye ethile ebuchosheni. Phela, inamaprotheni ethize ukusinika ikhono kweso ukubona amaphethini. Kulesi sifundo, abacwaningi ngisho Yasho lokho okunikeza isakhiwo sibe amaseli kwale ngxenye yobuchopho. It kuvela ukuthi ngokushesha nje sizithola endaweni entsha, noma banake bomuntu, konke lokhu kwaziswa ngokushesha "pops" e hippocampus. Kwenzeka kuphi lapho? Ososayensi bathi esitokisini sakhe ngaphambili ukudala okuthiwa 'uphonswa "yanoma yimuphi endaweni ongayazi, noma umuntu. It kuvela ukuthi uhlobo lelivakalako. Yini esinayo?? Ubuchopho bomuntu wonke izinhlelo kusengaphambili?
Ngingayithola kanjani uzizamele?
Ukuze uqonde kangcono kulokho okushiwoyo, ake uthole ukuthi ososayensi e Colorado lokhu kuhlola. Ngakho, bakhetha izifundo eziningana, wabalungiselela izithombe ngemifanekiso ubuntu adumile sphere ezahlukene, abantu abadumile, ezikhangayo ahlukahlukene, aziwa kuwo wonke umuntu.
Ngemva kwalokho, ababekhona babuza ukumemezela amagama izindawo ukuboniswa kanye namagama kanye namagama abantu. Ngaleso sikhathi, lapho bevumela izimpendulo zabo, abacwaningi kulinganiswa umsebenzi wabo ingqondo. Kwatholakala ukuthi hippocampus (ngakho sishilo ngenhla) sisesimweni womsebenzi ngisho naphakathi kwalabo abaphendula ongazange asazi ngisho impendulo cishe lesifanele. Ekupheleni umcimbi Watshela abantu ukuthi uma bebuka isithombe futhi baqonde ukuthi lo muntu noma uyibeke ezingajwayelekile, ezingqondweni izinhlangano ezithile wabonakala ukuthi bambonile kakade. Ngenxa yalokho yomzamo, ososayensi ukuthi uma ubuchopho uyakwazi izinhlangano ezengeziwe eyaziwa izimo ngokuphelele ezingajwayelekile, lena incazelo Deja Vu umphumela.
Njengoba sishilo, kukhona izinguqulo eziningana mayelana Iqiniso lokuthi vu Deja futhi kungani kwenzeka. Ngokusho lo mbono, umphumela iphathelene kukhangisa okubizwa ngokuthi inkumbulo zamanga. Uma ubuchopho kukhona ukwehluleka ezindaweni ezithile, iqala wonke ngenxa engaziwa ukuthatha eyaziwa kakade. Njengoba izazi zikholelwa memory zamanga "isebenza" alikho ibuphi ubudala, ngesipiliyoni sakhe has iziqongo umsebenzi - kusukela engu-16 kuya ku-18 futhi kusukela 35 kuya 40.
I splash lokuqala
Isiqongo lokuqala inkumbulo zamanga umsebenzi, ososayensi ukuchaza yokuthi usakhula kakhulu ngokomzwelo uzwakalise kuzo zonke izici. Abantu ngaleso sikhathi ngempela kakhulu futhi ngqo basabela izenzakalo. Ukungabi khona isipiliyoni esikhulu ekuphileni futhi kunendima kungani kukhona Deja Vu. Kuyinto uhlobo isinxephezelo, ukusikisela. Umthelela kubonakala lapho othile osemusha edinga usizo. Kulokhu, ubuchopho "iphendula" kuze kwimemori zamanga.
Isiqongo yesibili ivela nje ngesikhathi esibucayi maphakathi no-ukuphila. Lena inkathi ebalulekile ekuphileni komuntu ngenxa yokuthi lapho azizwa ISIFISO esidlule, kukhona ukuzisola noma usefuna ukubuyela eminyakeni wangaphambili ezithile. Nalapha futhi, ubuchopho kuziwa Aid libhekisela isipiliyoni. Futhi usinika impendulo yombuzo othi: "Kungani Deja Vu?".
I iphuzu Ngenxa bengqondo
Mangisho ukuthi lo mbono wehlukile esedlule. Odokotela kwadingeka akangabazi ukuthi ukubaluleka Deja Vu akunakugwenywa, ngoba isifo sokuphazamiseka kwengqondo. Futhi uma umphumela okungukuthi, ezingathi sína nakakhulu isimo. Bathi ngokuhamba kwesikhathi ngeke ikhule ibe ukubona izinto ezingekho okuvezwa ukudungeka kwemizwa eside, eyingozi ngabanye futhi imvelo yakhe. Odokotela emva izifundo waphawula ukuthi lo mkhuba kwenzeka ikakhulu kubantu abaphethwe zonke izinhlobo inkumbulo zamehlo. Parapsychologists musa siqambe enye inguqulo. Ngakho, ithambekele ukuhlobanisa Deja Vu ne ukuphindukuzalwa (ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila komphefumulo ngemva kokufa komunye umzimba). Yiqiniso, isayensi yesimanje alamukeli kule nguqulo.
Yini imicabango yabantu nezinye ngale ndaba?
Ngokwesibonelo, ngekhulu le-19, izazi zokusebenza kwengqondo German babachazela umphumela aphansi, ngenxa yokukhathala elula. Into wukuthi labo izingxenye zobuchopho banesibopho ukwazi nokuqonda, phakathi kwazo ungazange kwavunyelwana, okusho ukuphahlazeka. Futhi lubonakaliswa njengoba Deja Vu umphumela.
Physiologist kusukela Melika Burnham kushiwo okuphambene. Ngokwesibonelo, wayekholelwa ukuthi lo mkhuba lapho sifunda izinto ezithile, izenzo, abantu abaphathelene nalabo ukuphumula ingqikithi emzimbeni. Lapho sifundela umuntu othile waphumula ngokugcwele, ingqondo yakhe mahhala kusukela imizwa nobunzima, injabulo. Kwakuphakathi nalesi sikhathi ubuchopho babone konke ngokushesha okungaka. It kuvela ukuthi enganakile isivele uhlangabezana izinto zonke izinto ezingenzeka kumuntu esikhathini esizayo.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ziyakwazi kukhona vu Deja, ngicabanga ukuthi lokhu kuwumphumela amaphupho ukuthi ngelinye ilanga wabona. Iqiniso noma cha - kunzima ukusho, kodwa lowo mbono ukhona kososayensi. Ingqondo enganakile uyakwazi ukurekhoda amaphupho sesibonile ngisho eminyakeni eminingi edlule, bese ukudlala izingxenye zawo (abaningi bakubheka njengento isibikezelo esikhathini esizayo).
Freud futhi Jung
Ukuze uqonde kangcono ukuthi yini Deja Vu, masikhumbule movie mayelana Schuricke, eseneminyaka shí ukufunda Amazwibela, njengoba kwakumnyama angizange ngiqaphele yimiphi okwatholakala ngo yomunye efulethini noma amakhekhe ne lwesinaphi, akukho moya noma intombazane yena Lida. Kodwa lapho ivela kakade uyaqaphela, wakuzwa lokho esikubiza ngokuthi umphumela Deja Vu. Vele kuleli cala, umbukeli uyazi ukuthi Shura've ubulapha ngaphambili.
Freud sasho yake yachaza lesi isimo njengoba inkumbulo yangempela ukuthi 'overwritten "in the ukwazi bedle izici ezihlukahlukene okungekuhle. Kungase kube nzima ukwenza ukulimala noma isipiliyoni. Ezinye amandla wenza ngendlela ethile ukuthuthela endaweni noma enganakile, bese kuza iphuzu esithombeni "ocashe" kungazelelwe uyaphuma.
Jung futhi exhumene ne umphumela engakunakile elakhiwa abantu abaningi, eqinisweni, imemori wawobaba. Futhi lokhu kusibuyisela biology, ukuphindukuzalwa nezinye nezinye imibono eyayisinesikhathi.
It kuvela, akumangalisi bathi konke kuhlobene emhlabeni. Mhlawumbe, kulokhu, futhi, akunandaba mqondo ukubheka impendulo eyodwa elungile, uma kuphela ngoba asikho isiqinisekiso ukuthi ukhona? Akumangalisi ukuthi ngisho ososayensi abazange phambili version ukuthi kungenziwa ukufakazela ngokugcwele ayokwazisa izwe ukuthi impendulo itholakala.
Kunoma ikuphi, ungesabi uma kubangela lo mphumela. Cabanga-ke njengoba mfana njengoba into lifana umuzwa. Khumbula into esemqoka: uma lomkhuba okwakubaluleke scary noma yingozi ngempela, uzowathola wazi kahle ngalokhu.
Intuthu Station, akusiyo i-ayini. Yini lokukhetha?